Somaliland iyo Somalia Wax ay ka Wadahadlaan Meesha ma yaalaan ! ! ! ! Maxamuud Samatar | Awdalmedia.com
Somaliland iyo Somalia Wax ay ka Wadahadlaan Meesha ma yaalaan ! ! ! ! Maxamuud Samatar
Somaliland waxa ay madax banaanideedii ka heshay gumaystihii Ingriiska 06/26/1960, shan cisho ka dibna waxa ay la midawday Somalia oo madax banaanideedii ka heshay gumaystihii Talyaaniga 07/01/1960. Midawgii Somaliland iyo Somalia ka hor waxa qaaradda Afrika ka socday dhaqdhaqaaq xoriyada doona ahaa oo lagaga soo horjeeday gumaystayaashii reer ee Yurub ee kala qaybsaday Afrika 1884-1885 shirkii Barliin, Germany, shirkaasa oo ay Ethiopia qayb ka ahayd. Wadamadii reer Yurub kala qaybsaday Afrika waxa ay kala ahaayeen, Belgium, Germany, Portugal, France, Italy, Spain iyo England.
Gumaystayashii Yurub markii ay qaybsanayeen Afrika waxa ay ahayd xiligii ama Casrigii Warshadaynta/Industrial Revolution, waxana ay ku tartamayeen/dagaalamayeen dhul balaadhsi iyo sidii ay khayraad u heli lahaayeen, taas oo ahayd sababta u wayn ee keentay in ay Afrika kala qaybsadaan. Sida Qormada/Map-ka kor sawiran caddaynayo reer Yurub markii ay qaybsanayeen Afrika umay kala qaybin wadamada/dagaanada qayb si ku salaysan Qawmiyaddo/Ethnicity, Nationality.
Halgankii Daraawiishta iyo dhamaan qaybihii kala duwanaa bulashada Somaliland ka dib, 06/26/1960 waxa ay Somaliland ka xorowday Gumaystihii Ingriiska. Somaliland waxa ay noqotay wadankii uGu horeeyay ee laga taago calan Somaliyeed. Somaliland waxa ay noqotay ama tahay wadanka qudha ee ka horyimid XUDUUDIHII uu Gumaystaha Yurub kala dhex dhigay qawmiyadihii Afrika ama Somaliyeed. Umadda Somaliland iyada oo ka duulaysay sidii loo midayn lahaa Somali oo dhan/SHANTII Somaliyeed ee gumaystuhu kala qaybiyay, SHAN CISHO kadib 07/01/1960 waxa ay la midawday Somalia oo markaa madax banaanideedii ka heshay Gumaystihii Talyaaniga. Wadamada Afrika iyo Carabtu waxa ay ku dhismeen ama ku kooban yihiin XUDUUDII gumaysiga.
Horta midawgii Somaliland iyo Somalia 70160 muu ahayn mid qorshaysnaa oo labadii dal ee midoobay ku heshiiyeeen awood qaybsi deelitiran iyo aayaha laba dal haddii ay wax isbadalaan. Waxa se jirtay in ay hogaanka labada dal isla socdeen kana midaysnaayeen dhaqdhaqaaqii madax baanaanida iyo sidii loo midayn lahaa shantii Somaliyed, Somaliland, Somlia, Djibouti, NFD iyo Hawd and Reserve area/Somali Galbeed.
Madaaxdii Somaliland ee qaranimadoodii gaysay Somalia niyadda iyo warwarba kagama jirin xil ama hogaan sare iyo awood qaybsi, waxa waday jibo, xamaasad gobanimo iyo wadaninimo Somalyeed/Somali Nationalism, shakina kagama jirin in hogaanka iyo talada wadanka ay wax ku yeelanayaan . Iyada oo xaalka madaaxdii Somaliland sidaa ahaa ayaa waxa u caddaatay in ragii/madaaxdii Somlia ay arin khaa'inimo, tuugo iyo Maafios-nimo, dhaqan xun oo uu baray Talyaaniu ay hoosta ka wateen, horena qorshaha talada iyo hoggaanka dalka ay u gaadheen. Waxa madaxwayne noqday AHUN Aaden Cadde/inan la yaal/maqaar saar ay iska wateen AHUN hogaankii Majeerteen ee ka talinayay Xamar intii Talyaanigu joogay, sida Sharmarke, Abdi-Razak, Abshir/Haamaan iyo Muuse Boqor. Kadib markii ay xilalkii uGu muhiimsannaa ay wada qaateen hogaankii Somalia ayaa AHUN Ibrahim X Cigaal oo markaa hogaaminayay waftigii Somaliland, waxa ay ka dhigeen wasiirkii gaashaandhigga/Defense Ministe r, markaas ayaanu bilaabmay, halgankii, niyad jibkii, isqoomamayntii reer Somaliland. Arintaas oo keentay in Saraakiishii ciidamada ee Somaliland ay dayeen INQILAAB, 1961.
Laga bilaabo 1972-kii waxa ay dawladii Siyaad Barre isku badashay xukun military oo kali talis ah oo beelaysan oo lagu bar tilmaamsado beelo gaar ah, sida, Hawiye, Isaaq, iyo Majeerteen, taas oo keentay in dhamaan, wax garadkii iyo intii karaysaba ay ka yacaan wadanka. Waxa bilaabmay halkan ay hormood ka noqdaan saraakiishii ciidamada ee Somalia ee qaybta libaax ka qaatay dagaalkii 1977-kii ee ay hormoodka ay ka ahaayeen kali taliye yaashii, Siyaad Barre iyo Mangistu si ay kursiga ama hogaanka u sii dheeraystaan. Waxa ay arintani keentay in ay samaysmaan jabhado, sida, SNM, USC iyo SSDF, 1980-yadii.
Ciidamadii Siyaad Barre waxa ay xasuuq, iyo bara kicin ba'an kula kaceen beesha Isaaq ee Somaliland, halgankii SNM awgeed, waxana dhulka lala simay Hargeisa, Bar-bara iyo Burco, iyada oo ciidamadii Siyaad Barre adeegsanayaan tankiyo iyo diyaaradaha dagaalka, MIG-21 iyo MIG-17.
Mar labaad 05/18/991 waxa ay Somaliland dib u hanatay madax banaanideedii markii ay beelaha Somaliland iskuraaceen ama ku ku heshiiyeen Borama iyo Burco.
Hadaba haddii aanay meesha ool wixii ay Somaliland iyo Somalia ay ku midoobeen, maxay ka wada hadlayaan Somaliland Iyo Somalia.
2. Bilawgii ama midawgii u horeeyay awood qaybsi ma dhicin , Somaliland waa la khiyaameeyay.
4. Siyaasiinta/madaax ku sheegga Somalia waa beenaaleyaal, ma ogola in ay sheegaan taariikhda dhabta ah ee Somaliland. Waxa ay uGu yeedhaan Somaliland Gobolada Woqooyi.
5. Maantadan dawlad ku sheegga Somaliya ma hayso awood qaybsi dhab ah, darajada/xilka ugu sareeya ee la siiyaa Somaliland waa Ra'iisal wasaare ku xigeen ama wasiirka arimaha dibadda.
6. Somalia waxa qaadatay habka Federaalka ee ku salaysan Beelaha/Dawlad Beeleedyo.
7. Somalia ama dawlad ku sheegga Somalia ma hayso waxa ay Somaliland kula midawdo, waxa aan been ahayn.
Markaa wada hadal meesha kama banana.
8. Haddii lawada hadlayo waa in runta iyo taariikhda dhabta ah ee Somaliland/Somalia laga wada hadlaa, reer Somalia ma ogola runta.